मोबाइल प्रयोगका बारे प्रायः सोधिने प्रश्नहरु - BBC News नेपाली
मोबाइल प्रयोगका बारे प्रायः सोधिने प्रश्नहरु
के कति शुल्क लाग्छ?
हाम्रो भिडियो वा अडियो फाइलहरू डाउनलोड गरे बापत बीबीसीले तपाईंसंग कुनै शुल्क लिंदैन। तर तपाईंको सेवा प्रदायकले तपाईंले डाउनलोड गर्ने डेटाको आकारको आधारमा तपाईंलाई शुल्क लगाउनसक्छ। डेटा डाउनलोड गर्दा लाग्ने शुल्कका बारे तपाईंलाई थाहा छैन भने कृपया डाउनलोड गर्नुअघि आफ्नो सेवा प्रदायकसंग सम्पर्क गर्नुहोला।
डाउनलोड गर्न कति समय लाग्छ?
यो तपाईंको डेटा कनेक्शनको स्पीडमा भर पर्छ। सामान्य अवस्थामा एउटा क्लिप एकदेखि दुई मिनेटमा डाउनलोड हुनुपर्छ।
अडियो क्लिप कसरी सुन्ने?
आफूले चाहेको फाइललाई सिलेक्ट गर्नुस् र त्यो फाइल पूरा डाउनलोड भएपछि आफै बज्न थाल्नुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने उक्त फाइललाई डाउनलोड गरिएको फोल्डरमा गएर खोज्नुहोस् र त्यहांबाट बजाउन कोशिश गर्नुहोस्। याद राख्‍नुहोस् यदि तपाईंले थुप्रै टेक्स्ट मेसेज, फोटो वा भिडियो जम्म गरेर राख्‍नु भएको छ भने मोबाइलको मेमोरी भरिएको हुन सक्छ, त्यसैले ठाउं बनाउन केही फाइलहरू डिलिट गर्नुहोस्।
आवाजको गुणस्तर बढाउन सम्भव छ?
मोबाइल फोनको स्पीकरबाट बज्ने आवाज सामान्यतया सानो हुन्छ, त्यसैले हेडफोनको प्रयोग गर्न हामी सुझाव दिन्छौं।
मेरो मोबाइल उपकरणबाट रियल समयमा बीबीसीको रेडियो सामग्री एक्सेस गर्न मिल्छ?
मोबाइल उपकरणका निम्ती हाल हामीले त्यस्तो सेवा प्रदान गर्दैनौं।
कुन मोबाइल साधनले बीबीसी आईप्लेयर एक्सेस गर्न सक्छ र कुन चाहिंले डाउनलोड पनि गर्न सक्छ भन्ने जानकारीका लागि कृपया यो पेजमा जानुहोस्: http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/mobile/mobile_phone